Inkinga isikhumba - ngumqondo baye babhekana, ikakhulukazi intsha. Ukungapheleli ngesimo ukuqubuka futhi inflammations ufuna ukuqeda zonke izindlela eyaziwa kanye qha kwenela. Kungenteka yini? Lokho isetshenziswa ngokuyinhloko ukuxazulula inkinga "kanjani ukususa ububomvu induna kanye balahle yalesi ukungapheleli isikhumba." Ithuluzi ethandwa kakhulu - lokhu uhlangothi, noma kunalokho kungani leso senzo sabo. Kwake kwaba khona induna noma iphuzu black, ngifuna ukungena futhi, njengoba kubonakala, inkinga ziyoxazululwa. Nokho, le "usizo lokuqala" eshubisa isimo kuphela. Sidinga ukuba asabele ngaphambili kakhulu hhayi ngale ndlela.
Izimbangela ukuqubuka futhi inflammations
Ukuze siphendule lo mbuzo, indlela ukususa ububomvu Induna, udinga ukuthola imbangela yalesi umzuzu engiwukhumbulayo owawungemnandi. Ukuntuleka kokukhulumisana ukunakekelwa kahle isikhumba ezithandwa nesimungumungwane - lena isizathu esiyinhloko nesenzakalo yabo. Phela, uma isikhathi ukuvimbela ukubukeka of induna, ngaleso sikhathi kuyoba khona lutho ukuqeda. Ububomvu kwesikhumba ukuvuvukala e ezimbotsheni. Lena isignali kukhona zanqwabelana imikhiqizo ye nezindlala sebaceous. isikhumba oily kuyinto sihluke yokwenza evamile kakhudlwana nezindlala sebaceous. Uma ungenalo njalo ukuhlanza ebusweni ebusweni, namanoni aqoqana ikhule ezimbotsheni futhi kuphakamisa kumiswa namagciwane abangela izifo. ungqimba Horny kwesikhumba ngokungabi bikho ukunakekelwa efanele uhlala phezu futhi kudala uhlobo ipulaki. I pores avaliwe, futhi ukuzalela amagciwane. Ukuvuvukala (ububomvu) kanye izilonda - kuwumphumela okunobuthi ke. Indlela ukususa ububomvu Induna? Uma khama wakhe, wonke amagciwane uthole bungene egazini ukuvuvukala kuyoba eyingozi. Ngakho-ke, kufanele uqale ukusula ebusweni by ezifanele kusho isikhumba hlobo. Ngaphezu ukunakekelwa okuyisisekelo, ukuthenga izinyathelo ukhilimu iphuzu ukuxazulula ukuvuvukala (ububomvu). It isetshenziswa ngemva kwesinyathelo zokuhlanjululwa. Ungayisebenzisa ngisho ne izimonyo zokuhlobisa emini. Lokhu kusho okulula ukuyiphatha, futhi ngokuzikhethela isetshenziswa ezindaweni inkinga. Lona impendulo yombuzo othi kanjani ukususa ngokushesha le ububomvu. Induna kulesi simo ngeke, ngoba uthathe zonke izinyathelo zokuvimbela ukuba ukubukeka kwayo. Ungakhohlwa ngabo!
Indlela ukususa ububomvu induna ikhava-ups
Uma namanje abazange lakwazi ukugwema ukubonakala amawala, ungakwazi zicela usizo izimonyo. Ukufihla ukungapheleli isikhumba, kusho abakhiqizi bavela ngamathuluzi ahlukahlukene ukwakheka ngoba yokucasha wabo. Nabo, ungase futhi ukuxazulula inkinga kanjani ukususa ububomvu kusukela induna. nomkhiqizi ngamunye has isakhiwo ayo futhi ifomu zomuthi. Ngemva nezinqubo lasikhathi sonke lokuba ukunakekela umuntu nokusebenzisa ukhilimu kuphoyinti ukuvuvukala isinyathelo, sebenzisa concealer kuphela endaweni induna noma ububomvu. Esigabeni esilandelayo - izinyathelo evamile yokudala makeup yakho. Isikhumba amanoni inkinga Kunconywa ukubeka ngesisekelo kokuthona ibhulashi ekhethekile ukuze singathwesi avuse umsebenzi nezindlala sebaceous touch of iminwe. facials avamile, kanye okuqukethwe nehlanzekile wonke amathuluzi sokusebenzisa enze-up uzokusindisa kusukela ukuvuvukala kanye induna.
Tattoo "umkhumbi": kunencazelo imfihlo kufakazela lesi sithombe?
LPDzhi massage. Izibuyekezo mayelana imiphumela emangalisayo
Zonke izindlela zokuxhuma kwi-Inthanethi. Izinzuzo nokungalungi
Izimpikiswano ngesihloko esithi "Kungani beat ukushaqeka abantu?"
Lima ubhontshisi (lima ubhontshisi). Izidlo uhluke kubhontshisi Lima. Bean zokupheka
Ipulazi: kuba inzuzo?